प्रवीण बानियाँ | Prabin Baniya-An article writer प्रवीण बानियाँ | Prabin Baniya – An article writer
धनकुटे कान्छा– गैरपण्डितहरूले जुराइदिएको नाम । आज उनका लागि यही ‘बोल्ड’ नाम भइसक्यो, वास्तविक नाम ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’जस्तो लाग्छ । त्यसो त उनी पनि सकेसम्म अरूलाई आफ्नो खास नाम भन्न नपरे हुन्थ्योझैं गर्छन् । तैपनि, पंक्तिकारलाई दोस्रो स्रोतको मद्दतमा उनको नागरिकताको नाम खुलाउनुपरेको छ– शंकर चापागाईं, वर्ष ४०…
न त वार बनाउँछ, न त पार बनाउँछ
जिन्दगीले कत्ति मझधार बनाउँछ !
बुद्धहरू सोच्दा हुन्, गान्धिहरू सोच्दा हुन्
किन मान्छे अझै हतियार बनाउँछ ?
लाग्दैन‘थ्यो मलाई उसले भोलि यहाँ
यति नालायक सरकार बनाउँछ ।
कसले भन्छ ऊ सुरक्षित त भनेर ?
जो सुरक्षाको अग्लो दिवार बनाउँछ ।
यो त्यस्तो देश हो– जहाँको सरकार
स्कुल नबनाई पहिला…
देशको राजधानी काठमाडौंको व्यस्त ठाउँ, बागबजार । छेउमा पद्मकन्या क्याम्पस । रत्नपार्कदेखि बागबजार छिर्ने मुखमा घरैपिच्छे भेटिन्छन्– आर्ट हाउसहरू । करिब बीचतिर एउटा कुनामा साधारणजस्तो लाग्ने आर्ट हाउस छ– साकेला आर्ट । त्यही कुनामा ब्यानर लेख्दै गरेको अवस्थामा मध्य उचाइका एकजना चित्रकार कवि भेटिन्छन्– चन्द्र रानाहँछा ।
काठमाडौं ऐतिहासिक र नेपालको सबैभन्दा पूरानो सहर मानिन्छ । मध्यकालीन समयमा यसलाई ‘कान्तिपुर’ पनि भनिन्थ्यो । इतिहासविद्हरू हालको मालीगाउँमा भेटिएको इस्वी संम्वत १८५ को मूर्तिलाई यसको सबैभन्दा पूरानो र बलियो प्रमाण ठान्छन् । काठमाडौं कस्तो थियो र कसरी बस्ती बस्यो अनि त्यहाँ पहिले क–कसले शासन गरे भन्ने कुरामा विभिन्न…
तिमी गएपछि …….
By Prabin on September 15, 2017
अखबारमा यस्तो खबर हुनसक्छ
कुनै दिन निर्जन सहर हुनसक्छ ।
लाग्दैन‘थ्यो मलाई कुनै दिन यसरी
मान्छेको दिल पनि पत्थर हुनसक्छ ।
नदीको वेग हेरी रमाउनेले सोच्नू
छेवैमा रोइरा‘को बगर हुनसक्छ ।
लागेकै थियो मलाई तिमी गएपछि
गन्तव्यहीन मेरो सफर हुनसक्छ ।
सिंहदरबार बाहिर निस्केर हेर
आँसुले जलिरहेको घर हुनसक्छ ।